02 / 09 / 2019 - rayhab ဖြစ်ပါသည်
နေ့: စက်တင်ဘာလ22019
ဝန်ကြီး Turhan Mazıdağıသတ္တုပြန်လည်ထူထောင်ရေးနှင့်ပေါင်းစည်းမြေသြဇာစက်ရုံ
ပို့ဆောင်ရေးနှင့်အခြေခံအဆောက်အဦဝန်ကြီး Mehmet Cahit Turhan Mazıdağıသတ္တုပြန်လည်အသုံးပြုခြင်းနှင့်အတူအများအပြားဆွေးနွေးပွဲ, Mardin အုပ်ချုပ်ရေးမှူး Mustafa Yaman, TCDD အထွေထွေဒါရိုက်တာအလီ Ihsan သင့်လျော်သောနှင့်အဝေးပြေးမှ General Manager Abdulkadir Uraloğlကျင်းပရန် Mardin ဆီသို့ရောက် လာ. , [ပို ... ]
တူရကီနှင့် Sivas အမြင့်မြန်နှုန်းရထားလိုင်း
စုစုပေါင်းတူရကီ၏ 393 ကီလိုမီတာ (Kayaş) -Kırıkkal-Yozgat နှင့် Sivas အမြင့်မြန်နှုန်းရထားလိုင်းကို၏အရှည်နှင့်အဆုံးနေ့စွဲ၏အစယခုနှစ် 2007-2019 ဘို့စီစဉ်ထားသည်။ Yerköy-Sivas ပုဒ်မ: နုများ၏အခြေခံအဆောက်အဦများ၏ 250 ကီလိုမီတာရှည်လျားအပိုင်းစက်တင်ဘာလ 05.05.2008, မတ်လ 13 အပေါ် 2009 အခြေခံပေါ်မှာဖန်ဆင်းခဲ့သည် [ပို ... ]
Sivas စီမံကိန်းအဆင့်နိဂုံးမှ YHT တူရကီအဆင့်နီး
အဆိုပါ site ၏စာမေးပွဲအတွက် Yozgat YHT တူရကီ-Sivas ပို့ဆောင်ရေးစီမံကိန်းနှင့်အခြေခံအဆောက်အဦဝန်ကြီး Mehmet Cahit Turhan အတွက်Akdağmadeniခရိုင်, ထို့နောက် Sorgun အတွက်ရထားလမ်းဂဟေဆော်လုပ်ငန်းကိုဝင်ရောက်ခဲ့သည်။ ဘယ်မှာသည်သူ၏ Turhan "ကျနော်တို့ကက, တူရကီ-Sivas YHT စီမံကိန်းအတွက်နောက်ဆုံးခြေလှမ်းချဉ်းကပ်နေကြတယ်" [ပို ... ]
ဤတွင်မြေပေါ် Manisa ထိုကဲ့သို့သောချို့ယွင်းအတွက်များမှာ!
Mimar Sinan အားဖြင့် Manisa မြူနီစီပယ်အတွက် Boulevard ပေါ်တွင်တည်ဆောက်ခြင်းနှင့်မြေပေါ် Manisa အာဇာနည်နေ့နှင့်စစ်ပြန်လမ်းသွားလမ်းလာပျက်ကွက် ပတ်သက်. တိုင်ကြားမှုများအပေါ်ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်၏ Manisa မြူနီစီပယ်ဖြတ်သွားပထမဦးဆုံးလမ်းလျှောက်ခြေလှမ်းများဖြစ်ခြင်း၏ဂုဏ်ထူးသယ်ဆောင် [ပို ... ]
အဆိုပါ 2020 ခုနှစ်တွင် Sakarya တှငျကငျြးပခဲ့ပါလိမ့်မည်ကမ္ဘာ့ဖလားတောင်ဆိုင်ကယ်မာရသွန်ချန်ပီယံရှစ်၏အဓိကစပွန်ဆာများ၏တဦးတည်းလက်ခံထားသောလည်း Brisa Lassa ဖြစ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါလက်မှတ်ရေးထိုးပွဲအခမ်းအနားအပြီးစကားပြောသောသမ္မတ Ekrem Yüce "ဟုအဆိုပါချန်ပီယံငါတို့မွို့၌ငါတို့အဘို့ကြီးစွာသောမာနထောင်လွှားကျင်းပပါလိမ့်မည်။ [ပို ... ]
ပုဂ္ဂလိကဘတ်စ်ကားများ၏ဆုံးဖြတ်ချက်နှင့်အတူမြို့အနှံ့ UKOME, minibuses, တက္ကစီမီနီဘတ်စ်, စီးတီးဘတ်စ်ကား, ကျောင်းသားများနှင့်ဝန်ထမ်းဝန်ဆောင်မှု 22 ရာခိုင်နှုန်းခန့်ပျှမ်းမျှနှုန်းတက္ကစီကိုပုံမှန်အတိုင်းနှင့်အတူအစီအစဉ်များဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ အင်္ဂါနေ့သြဂုတ်လ 27 ၏အဖြစ်လျှောက်ထားခံရဖို့အဆိုပါ updated အခွန် [ပို ... ]
လူပျိုကဒ်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကာလတူရကီအတွက်စတင်ခဲ့သည်။ ယနေ့ မှစ. ပုဂ္ဂလိကဘတ်စ်ကား (OHO) အပေါ်သာ Ankarakart အသုံးပြုလိမ့်မည်။325 တစ်ပြားမှပေါင်တစ်ဘော်ဒါကြေး Ankarakart ။ cable ကိုကားတစ်စီးမှာရရှိနိုင်သည့်အတ္တဘတ်စ်ကား, Ankaray, မက်ထရို, အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်ပုဂ္ဂလိကမော်တော်ယာဉ်များ, [ပို ... ]
တူရကီပြည်သူ့ပို့ဆောင်ရေးလက်မှတ်ခများအတွက်အချိန်ပေါ်ရောက်ရှိလာခဲ့! .. အသစ်သောစျေးနှုန်းများကြီးပြင်းဒါက
တူရကီမြို့တော်မြူနီစီပယ်, မြို့တော်မြင့်တက်ကုန်ကျစရိတ်ကြောင့်အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးယာဉ်စီးခတိုးမြှင့်ဖို့ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၏တိုးပွားလာသောအကျိုးသက်ရောက်မှု, စီးပွားရေး, ANKARAKART ထိရောက်မှုနှင့်ရေရှည်တည်တံ့ရေးအပေါ် အခြေခံ. ဆက်လက်အဘို့ဖန်ဆင်းတော်မူ၏သစ်ကိုအခကြေးငွေအစီအစဉ်များနှင့်အတူပြန်လည်အနက်အဓိပ္ပါယ်ဖွင်ခဲ့တာ။ အတ္တဘတ်စ်ကား, [ပို ... ]
rayhab 02.09.2019 ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတင်းလွှာဖြစ်ပါသည်
စစ်တမ်း Project မှန်ဆောင်မှုများအဘို့မြေပြိုမှုခရိုင်တိုးတက်မှုအလားတူမီးရထားသတင်းများလက်ခံရရှိမည်ဖြစ်ပြီးအကျိုးစီးပွားအခြား haberlerrayhab ၏ဖြစ်နိုင်သည်စီးပွားရေးနောက်ဆက်တွဲ Gare လမ်းကို Maintenance ပြုလုပ်ခြင်း 09.01.2019 ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတင်းလွှာ 09 / 01 / 2019 အဆောင်ဘူတာသည်နှင့်ဝန်ဆောင်မှု Repair 03.01.2019 တင်ဒါ rayhab Get ပါလိမ့်မယ် [ပို ... ]
Boztepe Bagra အဆိုပါ Viaduct ဓားမြှောင်
ဥပဒေ Boulevard လမ်းဆောက်လုပ်ရေးအလုပ်၏မူဘောင်အတွင်းအသစ်တခု Viaduct Boztepe ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းချိတ်ဆက်ခြင်းကိုအလွန်တုံ့ပြန်မှုဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ viaduct 100 မီတာခွကေိုဓားမြှောင်ဖြစ်ဖော်ပြအပ်ပါသည်ကျော်လွန်ပါလိမ့်မယ်အရာ, Trabzon ၏စိတ်နှလုံးသို့နှင်ထုတ်ခြင်းကိုခံရပါလိမ့်မယ်။ Boztepe ဖို့မြို့ viaduct ၏နှလုံးကိုတစ်ဦးဓားမြှောင်နဲ့တူညပ်ခံရဖို့ [ပို ... ]
Red Bull ကား Park ကနစ်အစ္စတန်ဘူလ် 10 တထောင်ကမ္ဘာ့ဖလားဗိုလ်လုပွဲ watched
အဆိုပါ Red Bull ကား Park ကနစ်ကမ္ဘာ့ဖလားနောက်ဆုံးတနင်္ဂနွေအိမ်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကျင်းပပေးသော IMM အစ္စတန်ဘူလ်ရန်အလွန်စိတ်လှုပ်ရှားခဲ့သညျ။ လေယာဉ်မှူးကွဲပြားခြားနားသောနိုင်ငံများမှ 16 ဖို့ရုန်းကန်အဖြစ် 18 ပြိုင်ပွဲအတွက်ဂျော်ဒန်ရှေ့ပြေး Anas အယ်လ်မင်္ဂလာပါချန်ပီယံဖြစ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါဒဏ္ဍာရီနီ [ပို ... ]
Konya Metro နူးညံ့စက်တင်ဘာလထဲမှာလုပ်ပါလိမ့်မည်
နိုင်ငံတော်သမ္မတအာဒိုဂန် Konya Metro ယှဉ်သောဧဝံဂေလိတရား။ ကျနော်တို့ Konya အတွက်မြေအောက်ရထားများ၏ဆောက်လုပ်ရေးစတင်နေကြသည် "Konya အတွက်အဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားတွင်စကားပြောအာဒိုဂန်။ ကျနော်တို့စက်တင်ဘာလ၌ဤလိုင်း၏ပထမအဆင့်အဘို့နုကိုထုတ်သယ်။ "သူကဆိုသည်။ အာဒိုဂန်ကသူ့ရဲ့မိန့်ခွန်းမှာ "ဒီမျဉ်းမှာတော့ကျနော်တို့စက်တင်ဘာလအတွက်တင်ဒါ၏ပထမဦးဆုံးစင်မြင့်သယ်။ မွေပွငျအောကျလမျး [ပို ... ]
Bursa ရဲ့ပင်မလုပ်ငန်းစဉ်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး '' သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်ရှ Node ''
ကျနော်တို့ကဒီ ... 1984-1989 ကာလ Bursa စီးတီးကောင်စီအရှိဆုံးတန်ဖိုးရှိရှိကောင်စီလွန်သည် လာ. မြင်တော်မူ၏။ အထူးသဖြင့်အသွားအလာ, သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးပြဿနာများကိုဖြေရှင်းနည်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစီမံကိန်းများထုတ်လုပ်ခဲ့သမ္မတ Ekrem Barışıkအဲဒီအခြိနျမှာပထမဦးဆုံးအလုပ်ပြုလေ၏ဖြစ်ပါတယ်။ ယနေ့ပင် Nilufer ခရိုင်ဖွဲ့စည်းရေးကြောင်း ... [ပို ... ]
ဒါကသတင်း Konya အတွက်လမ်းရထားစီးအများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကာလနောက်ထပ်အရာ Thessaloniki အတွက်ဂရိစစ်တပ်ကအော်တိုမန်ပြည်နယ်ကကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းအချိန်အထိအတွက်အစောပိုင်းအစ္စတန်ဘူလ်နှင့် Izmir ခုနှစ်တွင်လွတ်ကျက် xnumx'l အဖြစ်ဘော်လကန်စစ်ပွဲအတွင်း 1992 နှစ်ပေါင်းနှောင့်အယှက်မယ်လို့သူမြား၏ "1900 စတင်ခဲ့" [ပို ... ]
Narlıdere Metro ရထားလမ်းအကျပ်အတည်းယခုထွက်ဖဲ့ကြောင်းအသားတင်ဒါမှ Izmir တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်ဘီလီယံကိုပြီးခဲ့သည့်နှစ်က 1 27 သန်း liras Gülermak Heavy Industries, ဆောက်လုပ်ရေး & ချုပ်ဝင် Inc က။ စာရွက်စာတမ်းများအရ၎င်းကန်ထရိုက်တာEGELİ Sabah '' Ercan Gürcanrထံမှရ [ပို ... ]
ယနေ့တွင်သမိုင်းစက်တင်ဘာလ21857 Rumelia အတွက်လိုင်းများ၏ Constanta-Çernova (Bogazköy) s ကိုအမှန်တကယ်စာချုပ်-လက်မှတ်ရေးထိုးလိုင်းဆောက်လုပ်ရေးအပြီးသတ်ခဲ့သည်အတွင်းပထမဆုံးမီးရထားလမ်းဖြစ်သည်။2စက်တင်ဘာလ 1908-ကျောင်းတိုက် Thessaloniki ရထားလမ်းလုပ်သားများတိုးတက်လာသောလုပ်ခလစာနှင့်အချိန်အလုပ်လုပ်အခြေအနေများအဘို့အသပိတ်ပေါ်သွား၏။ တောင်းဆိုမှုများ [ပို ... ]